Samsung ရဲ့ Galaxy S7 နှင့် S7 Edge ရေစိုခံစမတ်ဖုန်း - သတင်း Rule
Samsung ရဲ့ Galaxy S7 နှင့် S7 Edge ရေစိုခံစမတ်ဖုန်း
တောင်ကိုရီးယားမိုဘိုင်းကုမ္ပဏီကြီးပန်ကာအကြိုက်ဆုံး microSD card slot နှင့်အတူသစ်ကိုထိပ်တန်းအဆုံး Android ဖုန်းများမိတ်ဆက်, စူပါအစာရှောင်ကင်မရာများနှင့်ပိုကြီးဘက်ထရီ
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “MWC မှာစတင်မှာ Samsung က Galaxy S7 နှင့် S7 Edge ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းများ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com နင်္ဂနွေနေ့ 21 ရက်ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 18.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Samsung ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ် Galaxy S7 စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းများထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်, ကအန်းဒရွိုက်စျေးကွက်၏ထိပ်တန်းအဆုံးထွက်ပိတ်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်အဖြစ်အကြိုက်ဆုံး features တွေကိုပြန်ပို့ခြင်းအမှုတွင်.
အသစ်က Galaxy S7 နဲ့ Galaxy S7 Edge Android စမတ်ဖုန်း, Mobile World Congress မှာဘာစီလိုနာအတွက်ပွဲထုတ်မိတ်ဆက်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၏ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်တည်ဆောက် လူကြိုက်များ S6 ဗားရှင်း ဒါပေမဲ့ IP68 ရေစိုခံတာနှင့်ကာ microSD card slot ထည့်ပါ – နှစ်ဦးအင်္ဂါရပ်တွေကိုရီးယားကုမ္ပဏီသည်အထိလူသိများဖြစ်လာခဲ့သည် 2015.
က Galaxy S7 တစ်ဦးပြားချပ်ချပ် 5.1in screen ကိုကားကွေးဖန်ပြန်ရှိပါတယ်, အ Ergonomics မှထည့်သွင်း. အဆိုပါပိုကြီးက Galaxy S7 Edge ကရရှိနိုင်ဆုံးကျဉ်းမြောင်းတဲ့ phablet ၏တစ်အောင်မျက်နှာပြင်တစ်ဖက်တစ်လက်ဝဲမှာကွေးကြောင်း 5.5in screen နဲ့ညာလက်ရုံးအနားရှိပြီးအနည်းငယ်မျှသာ bezel ရှိပါတယ်.
အဆိုပါစမတ်ဖုန်းအသစ်ချဲ့သိုလှောင်ကာ microSD card slot များ, Samsung ကဖုန်းများနောက်ဆုံးနှစ်တိုင်အောင်ခဲ့တစ်ခုခု. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးဟာ Android ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုပြေး 6.0 Marshmallow, တိုးတက်လာသော multitasking အဘို့အရမ်၏ 4GB ရှိသည်နှင့် 30% ထိုဖုန်းများကိုအပူကိုရှောင်ရှားဖို့ "အပူဖြန်" ရေအေးနည်းပညာကိုပိုမိုအစွမ်းထက်ပရိုဆက်ဆာ.
နှစ်ဦးစလုံးဟာစမတ်ဖုန်းလည်းသိသိသာသာပိုကြီးဘက်ထရီများ, အဆက်မပြတ်အာဏာ point ရဲ့ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကတိပေးသော. အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဂိမ်းကစားနေစဉ်ဘက်ထရီပါဝါကိုချွေကိုကူညီ tools တွေကိုသွင်းချပြီ, ကြောင်းလည်းသုံးစွဲသူတွေကို console ကိုဂိမ်းကစားနိုင်လမ်းကိုဆင်တူသူတို့ရဲ့ဂိမ်းအစည်းအဝေးများ၏ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖမ်းယူဖို့ခွင့်ပြု.
Samsung ရဲ့ Galaxy S7 တစ်ဦးအမြဲ-အပေါ် display ကိုအင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်, သောအချိန်ကိုဖော်ပြပေး, နေ့စွဲသို့မဟုတ်ခပ်သိမ်းသောကာလမှာ screen ပေါ်မှာအခြားကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung ကလည်းအမြဲ-တခုတခုအပေါ်မှာတွန်းအားပေးသည်အချိန်ဖြင့်တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာဂရပ်ဖစ်လင်းမျက်နှာပြင်ရဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို display ကို setting ကို, နေ့စွဲသို့မဟုတ်အခြားအသုံးပြုသူ-Configure လုပ်လို့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်. အဆိုပါကုမ္ပဏီအ feature ကိုထက်လျော့နည်းဆုံးရှုံးပါလိမျ့မညျဆို 1% တစ်နာရီကိုဘက်ထရီ.
အဆိုပါဖုန်းများလည်းအသစ်တခုရှိ, စိတျထဲမှာအနိမ့်အလင်းဓါတ်ပုံနှင့်အတူဒီဇိုင်းပါးလျသော 12-megapixel ကင်မရာ. ဒါဟာပိုကြီး 1.4um pixels ကိုနှင့်တစ်ဦး, f-stop နှင့်အတူတစ်မှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုသည် 1.7 စေ 25% ထိုအာရုံခံကိရိယာသို့ပိုပြီးအလင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဟာအလွန်အစာရှောင် autofocus system ကို, grainy သို့မဟုတ်မှုန်ဝါးဓါတ်ပုံကိုတားဆီးဖို့.
အဆိုပါကင်မရာကိုယခုမှသာဖုန်း၏န​​ောက်ကျောကနေ 0.46mm ထွက်ကပ်လျက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung က, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ, ဖွံ့ဖြိုးဆုံးစျေးကွက်ထဲမှာ Apple နှင့်အတူစမတ်ဖုန်းဝယ်လက်များ၏ရေပေါ်မဲကျော်တစ်ဦးစစ်တိုက်ရာတွင်သော့ခတ်နေသည်.
အဆိုပါကုမ္ပဏီဘက်ထရီအပေါ်အလောင်းအစားသည်, ဝယ်လက်ကိုသှေးဆောငျဖို့ရေစိုခံကင်မရာတိုးမြှင့်မှုများ, စမတ်ဖုန်းပတ်လည်ပိုကြီးဂေဟစနစ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ကြိုးစားနေစဉ်.
သူ့ရဲ့ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူက Samsung Galaxy S7 Edge. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Rory အိုနေးလ်, Samsung ကဟုဆိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏ဦးခေါင်းကို: "ဗြိတိန်စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ရင့်ကျက်ထားပါတယ်. သူတို့သညျအောကျ 25 ယခုအခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စက်ကိရိယာများနှင့်၎င်း၏အပြန်အလှန်အပေါ်အလေးပေးနှင့်အတူတစ်စမတ်ဖုန်းကိုရှေးခယျြ. ကျနော်တို့့စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်ထက်ပိုလုပျဆောငျဖို့ရှိသည်, ကျွန်တော်တစ်ဦးမှဖုန်းအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုပြန်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရန်ရှိသည်။ "
ကတွန်းအားပေး၏တစိတ်တပိုင်း SmartThings ဟုခေါ်ဝေါ်သောအရာစနစ်၏ Samsung ရဲ့အင်တာနက်ကိုဖွစျလိမျ့မညျ, ကုမ္ပဏီ၏ရုပ်မြင်သံကြားမှပေါင်းဆက်သွယ်မှုများကို, အိမ်မှာအသံစနစ်တွေ, ကင်မရာများနှင့် Facebook ရဲ့ Oculus Rift နှင့်အတူပူးပေါင်းလုပ်က၎င်း၏ virtual reality နားကြပ်.
Samsung ကလည်းအမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားမှာလက်ရှိရရှိနိုင်ပါက၎င်း၏မိုဘိုင်းဖုန်းချိတ်ဆက်မှုငွေပေးချေမှုစနစ်ကရောက်စေဖို့ရည်ရွယ်ဟုဆိုသည်, Samsung က Pay ကို, ခြောက်ပိုပြီးစျေးကွက်သို့ 2016, ဗြိတိန်နိုင်ငံအပါအဝင်, စပိန်, သြစတြေးလျ, ဘရာဇီး, တရုတ်နှင့်စင်္ကာပူ.
အဆိုပါ Gear 360 Samsung ရဲ့အသစ် 360 ဒီဂရီကင်မရာ, ငါးနှစျ-မျက်စိမှန်ဘီလူးနှစ်ခု 15-megapixel ကင်မရာ sensor များ အသုံးပြု. ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးနိုင်စွမ်း. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung ကလည်း 360 ဒီဂရီကင်မရာကိုစတင်, ထိုဂီယာ 360, သာအနည်းငယ်ပိုကြီးတဲ့ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုထက်သေးငယ်တဲ့ဘောလုံးကိုပုံနဲ့ဆင်တူတယ်. ဒါဟာနှစ်ဦး 180 ဒီဂရီငါးမျက်စိမှန်ဘီလူးရှိပါတယ်, အဝေးကနေတစ်ဦးက Samsung ဖုန်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အချိန်ထဲမှာဗီဒီယိုသို့မဟုတ် 30-megapixel ကင်မရာဓာတ်ပုံများ stream နိုင်.
Samsung ၏ Galaxy S6, Edge ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး: အပျော်အပါးကိုမေ့ထား, မ function ကို
37388	5 Android မှာ, အပိုဒ်, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, Mobile World Congress တွင်, သတင်း, Samsung က, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ
← တစ်နှစ်တာ၏ပြီးပြည့်စုံသောအချိန် Make မှ 10 Big ဝယ်ယူ [MENTALFLOSS] မျိုးရိုးဗီဇပြန်ကြားရေးကြှနျုပျတို့ကိုရောဂါများအတွက်လူနေမှုပုံစံစတဲ့အန္တရာယ်များကိုသဘောပေါက်နားလည်ခြင်းကိုကူညီပါနိုငျ →